घाँटीको क्यान्सर कसलाई हुन्छ ? हेर्नुहोस डाक्टरको सुझाव यस्तो छ – Complete Nepali News Portal
घाँटीको क्यान्सर कसलाई हुन्छ ? हेर्नुहोस डाक्टरको सुझाव यस्तो छ
ScotNepal November 20, 2020
लगातार घाँटी दुख्नु घाँटी क्यान्सरको अति सामान्य लक्षण हो। घाँटीमा क्यान्सर हुन लागेको छ भने अधिकांशलाई निल्ने समयमा अत्यन्तै दुखाइ हुन्छ। साथै खानेकुरा घाँटीमै बसिरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ। शब्द उच्चारण गर्न समेत कठिन भई आवाज सानो र धोत्रो हुँदै जान्छ।
घाँटी क्यान्सरका यस्ता लक्षण देखापरेमा तुरुन्त चिकित्सलाई देखाइहाल्नु पर्छ। त्यसो भए घाँटीको क्यान्सर कसलाई हुन्छ ? हेर्नुहोस डाक्टरको सुझाव यस्तो छ :
बेड र अक्सिजन अभावलाई यसरी ब्यबस्थित गरौँ – डा. रवीन्द्र...
अहिले महामारी निकै बढेको छ | यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा हामीहरु...
यो ३ महिना राजनीति, प्रतिष्पर्धा, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सबै द्वेष...
डा.रबिन्द्र पाण्डेका यी १६ सुझाव, होम आइसोलेसनमा सास फेर्न गाह्रो...